Mihitatra ny ‘Quora Rosiana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2016 9:26 GMT
Ny Fanontaniana ao amin'ny iOS.
Nitatitra tamin'ity fiandohan'ity fahavaratra ity ny fampahalalam-baovao ara-teknolojika “Secret Firms” (Orinasa Miafina) fa nahafeno fampiasam-bola fihodinana faharoa ny tranonkala Rosiana fanontaniana-sy-valiny, nahaavotra 500.000 dolara, ary nanokatra birao vaovao tao Berlin sy Londra. Ny tranonkala, izay nanomboka tamin'ny Martsa 2015, dia ahafahan'ny olona miteny Rosianina manerantany hametraka fanontaniana maro samihafa, ka hanangona ny valin'ireo fanontaniana ireo ny manam-pahaizana manokana amin'izany sehatra izany.
Ny andraikitry ny tranonkala – nofintinina tamin'ny herintaona tao anatin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny mpiara-mpamorona ny TheQuestion, Tonia Samsonova – dia ny “manapariaka ny kolontsaim-panontaniana”. Nilaza i Samsonova fa tena tsy ampy tokoa ao Rosia ity kolontsaina ity, sy ny fanamafisana ny fahaiza-mandinika eo amin'ny vahoaka, ka afaka mandeha lavitra raha “hanohintohina” ny fampielezan-kevitry ny ampiran'i Kremlin.
Tamin'ny antsafa iray hafa ho an'ny tranonkala Vc.ru, nanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny fananana manam-pahaizana manokana amin'ny famaliana fanontaniana i Samsonova, na dia manana ny famaritany manokana ny teny hoe “manam-pahaizana manokana” aza izy :
Ny hevitray dia tsy sata miraikitra aminao mandrakizay izany fahaizana manokana izany. Ohatra, raha mahazo diplaoman'ny Fizika ianao, dia manam-pahaizana momba ny Fizika. Mba ahatonga ny valinteny ilaina, zava-dehibe ny fahaizana manazava zava-sarotra amin'ny fomba mahomby. […] Noho izany, nanapa-kevitra izahay fa hanangana fiarahamonina izay mitovy vintana ny ankizy mpianatra, ny olona liana amin'ny simia, sy ny mpampianatra eo am-panombohana, ary ho faritan'ny isan'ny valinteny ny “fahaizan'izy ireo”, izay [lazain'ny fiarahamonina fa] ilaina .
Ny fanontaniana dia miainga amin'ny ““Aiza no ahafahako mijery fampianarana avy ao Havard, Oxford, sy ny hafa miaraka amin'ny dikantsoratra Rosiana?” hatramin'ny hoe “Manao ahoana ny hoavy hitanao ho an'i Rosia?” sy ny hoe “Tsory ny marina, inona no sampinao?” Afaka manome valiny ny olona rehetra nisoratra anarana tao amin'ny tranonkala, ary mamaritra izay heverina fa valinteny “tsara indrindra”, mampakatra azy ho eny amin'ny farany ambony sy misongadina voalohany ny rafitra fankatoavan'ny tanana [ankihibe ambony] (mitovy amin'ny zavatra hitanao ao amin'ny Quora sy ny Reddit). Afaka misoratra anarana ao amin'ny “manam-pahaizana” ankafiziny, izay mety mahazo “laharana” ambony indrindra amin'ny alalan'ny famelàna valinteny manintona hatrany hatrany ireo mpiserasera. Amin'ity rafitra ity, afaka mahazo valinteny lalina tamin'ny fanontaniana tsy ampoizina toy ny hoe “Ahoana no fianihanako tahaka ny Hosara (miaramila mpitaingi-tsoavaly)?” ireo mpiserasera.
Ao amin'ny “fitaovana haino aman-jery“, milaza ny TheQuestion fa nanana mpiserasera 80.000 voasoratra anarana izy tamin'ny Febroary 2016, ary mpitsidika manokana maherin'ny tapitrisa. Nanomboka nanao antso tamin'ireo orinasa, manolotra “kaonty hoan'ny orinasa” afaka mametraka sy mamaly fanontaniana miavaka ny tranonkala. Azo inoana ity tosika ho an'ny tsenan'ny mpanjifa ity fa tena mahaliana ny mpampiasa vola: araka ny filazan'ny tranonkalan'ny indostria RuNet Roem.ru, dia mety hirotsaka an-tsehatra ao amin'ny orinasa ny Filoha Tale Jeneralin'ny Yandex, Volozh Arkady, na dia mbola tsy nanamarina izany aza ny birao fampitam-baovaon'ny Yandex.
Ny lazan'ny Ny Fametrahana Fanontaniana
Amin'ny fomba maro samihafa, ny TheQuestion dia miasa toy ny endriky ny tolotra tahaka ny “ASKfm”ao Rosia, izay ahafahan'ny mpiserasera manontany na inona na inona ampahibemaso na tsy mitonona anarana. Marihina fa ny ASKfm dia malaza eo amin'ireo zatovo ao Rosia tahaka ny any Alemaina na any Etazonia. Misy koa ireo dika mitovy hafa mivezivezy ao amin'ny RuNet ihany koa. Otveti@mail.ru, ohatra, dia saika tena dika mitovy amin'ny “Yahoo Answers.”
Saingy nampiasa ny tolotra antserasera fanontaniana sy valiny amin'ny fomba vaovao kokoa ny Rosiana, indrindra ho fampitàna vaovao na mangataka torohevitra ao amin'ny vondrona eo an-toerana. Ao amin'ny Vkontakte (tambajotra sosialy malaza indrindra any Rosia), saika ny tanàna sy tanàn-dehibe tsirairay avy no manana vondrona maromaro natokana ho amin'izany—ny ankamaroan'ny fikambanana dia mitondra ny anarana hoe “Подслушано в …” (Re tao …), arahan'ny anaran'ny tanàna. Mampiasa ireo vondrom-piarahamonina ireo ny olona ao an-toerana iresahana zava-nitranga vao haingana tao an-tanàna, mangataka torohevitra, mizara fampitandremana, mandefa dokam-barotra, na milaza tantara fotsiny. Nandritra ny ady tao atsinanan'i Okraina, ohatra, nanjary fomba malaza ho an'ny mponina ireo vondrom-piarahamonina Vkontakte mba hitaterana ny hetsiky ny miaramila sy ny tifitra basy aman-tafondro.
Ny fandefasana votoaty ao amin'ny Vkontakte amin'ny ankapobeny dia mitaky fifandraisana amin'ny mpandrindra ny vondrom-piarahamonina, izay afaka mandefa ny fanontaniana ao amin'ny tabilaon'ny vondrona lehibe avy eo. Manasarotra ny tsy fitononana anarana izany, na izany aza, izay miampy ny fiantsoana ny ASKfm, izay ahafahan'ny mpiserasera misoroka ny fizarana ny mombamomba azy ireo manontolo. Niezaka namaha ity olana ity ny klioban'ny “re tao”, namorona sehatra iray mahaleotena amin'ny fomba feno tanteraka sy tsy mitonona anarana amin'ny fandefasana hafatra ho an'ny vondrona eo an-toerana ao amin'ny Vkontakte (tsy mila fisoratana anarana fanampiny).